SAWIRRO: Wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada XFS oo la kulmay saraakiil ka tirsan AMISOM. – Wakaaladda Wararka Hiilnews
SAWIRRO: Wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada XFS oo la kulmay saraakiil ka tirsan AMISOM.
Sabti, October, 20, 2018(HNN) Wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Feysal Cumar Guuleed ayaa maanta xafiiskiisa magaalada Muqdisho ku qaabilay saraakiil ka tirsan ciidamada booliska AMISOM, iyo xubno ka tirsan maamulka gobolka Banaadir.
Saraakiisha uu la kulmay wasiir ku xigeenka waxbarashada Soomaaliya ayaa waxaa ka mid ah Johnson oo ka tirsan booliska AMISOM iyo Yoonis Nuur oo ka socda gobolka Banaadir.
Kulankan ayaa looga hadlay siddii wada jir la iskaga kaashan lahaa wacyi gelin loo sameeyo ardeyda wax ka barta iskuullada gobolka Banaadir islamarkana laga wacyi geliyo fikirka xagjirka ee dhaliya rabshadaha.
Wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya Feysal Cumar Guuleed ayaa sheegay in xubnahan ka socday saraakiisha booliska AMISOM iyo gobolka Banaadir isku afgarteen qodobada ay ka wada hadleen.
“Maanta waxaan xafiiskeyga ku qaabilay saraakiil ka tirsan booliska AMISOM oo uu ka mid yahay Johnson iyo Yoonsi Nuur oo ka socday maamulka gobolka Banaadir, arrimaha aan ka wada hadalnay waxaa ka mid ah sidii iskaashi looga sameyn lahaa sidii wacyi gelin loogu sameyn lahaa ardeyda taasoo ku saabsan in laga wacyi geliyo fikirka xagjirka ee ka dhaliya rabshadaha, waana isku afgaranay,”ayuu yiri wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada xukuuumadda Soomaaliya.
Wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ayaa dadaal ugu jirta siddii loo horumarin lahaa waxbarashada dalka iyadoo wasiirka waxbarashada Cabdulahi Goodax Barre uu maalintii shalay ku dhawaaqay in la dhisi doono guddiga tacliinta sare ee dalka, si dib u habeyn loogu sameeyo waxbarashada jaamacadaha dalka, loona ogaado tayadooda.
SAWIRRO: Wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada XFS oo la kulmay saraakiil ka tirsan AMISOM. added by admin on 20/10/2018